Kedu ihe anyị ga - atụ anya n'aka Samsung Galaxy Tab S6 Lite? | Gam akporosis
Ọzọ anyị na-ekwu maka otu n'ime mbadamba mbadamba nke oge a, nke na-abụghị ihe ọzọ karịa Samsung nke Galaxy Tab S6.
Anyị ekpughelarị ozi dị iche iche na njirimara teknụzụ na anyị ga-achọta na ngwaọrụ a dị n'etiti. Anyị asachawokwa ọnụ ahịa enwere ike ịnye iwu na ahịa, ihe anyị na-emetụ na ohere ọhụụ a maka ndepụta ahụ apụtala.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite erubeghị ịmalite ya na Europe, mana ndepụta ọhụrụ na weebụsaịtị nke ụlọ ahịa Britain bụ Argos na-ekpughe na ozi ndị ọzọ banyere ọnụ a ga-abịa n'oge na-adịghị anya, nke na-atụ anya ngosi na-abịanụ na mmalite nke ngwaọrụ na mpaghara.
Ọhụrụ a leak n'ụzọ doro anya na-egosi na e mere nke a mbadamba, nakwa dị ka S-Pen stylus na ọ ga-eji. N'ezie, nkọwa dị ka nnukwu ihuenyo nwere bezels dị warara na otu igwefoto dị n'azụ gosipụtara na nsụgharị anyị tinye n'elu.
A ga-enye mbadamba nkume na nhọrọ agba abụọ, nke bụ Oxford Gray na Agora Blue. Na mgbakwunye, dị ka ọnụ ụzọ ámá GSMArena na-agwa, Ọ nwere ihuenyo Ikanam 10.4 nke anụ ọhịa na mkpebi FHD +. Igwefoto selfie nke 5 MP kpuchiri ihu igwefoto ahụ, ebe azụ nwere otu onye na-agba egbe 8 MP. Na mgbakwunye na nke a, n'okpuru mkpuchi ka anyị na-ahụ Chipset Exynos 9611 jikọtara na 4GB RAM. Ejiri batrị dị na 7,040 mAh nke nchekwa. Ndepụta ọhụrụ ahụ na-egosipụtakwa na anyị na-enweta mkpọchi isi okwu.
Ebe nrụọrụ ahụ gara n'ihu na-ekwu na akụkụ nke mbadamba nkume dị ka 244.5 x 154.3 x 7mm ma ọ dị arọ gram 467. Pricegwọ maka United Kingdom bụ £ 339 maka naanị 64GB Wi-Fi, ma a na-atụkwa mbata nke ụdị 128 GB.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Kedu ihe anyị ga - atụ anya n'aka Galaxy Tab S6 Lite?